Mahad Salaad “Iscafinta haddii ay dhab tahay waxaa la rabaa in loo fadhi Badasho” | Wardoon
Home Somali News Mahad Salaad “Iscafinta haddii ay dhab tahay waxaa la rabaa in loo...
Mahad Salaad “Iscafinta haddii ay dhab tahay waxaa la rabaa in loo fadhi Badasho”
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in madaxda dowladda iyo maamulada looga baahan yahay inay ka dhabeeyaan barnaamijka is cafinta.
Isaga oo ka qeyb galayay munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi oo lagu soo dhaweynayay madaxda cusub ee Puntland, ayuu ka sheegay magaalada Garowe inay kulmisay masuuliyiin muddo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxeysay.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in xafladii ka dhacday magaalada Garowe sido kale ay isku arkeen dad siyaasiyiin ah oo deris ah balse aan sanado wada hadal, isaga oo madaxweynaha Puntland ku amaanay dadaalka uu sameeyay.
Dhinaca kale mar uu ka hadlayay doorashadii ka dhacday magaalada Garowe ayuu weeraray madaxda dowladda Soomaaliya, isaga oo sheegay inaysan u suuragalin sidii ay doonayeen.
Wuxuu sidoo kale si kaftan ah u sheegay in ciidamo AMISOM ah aysan ku sugnayn deegaanada Puntland, islamarkaana aysan suurogal aheyn ruuxii kahor yimaadaa inay AMISOM xiraan, sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleDhisme ku dumay Suuriya oo dad badani ay ku dhinteen
Next articleSAWIRO: Shacabka Muqdisho oo bilaabay inay iskood isaga qaadaan qashinka
DAAWO: Ex Wasiir Abgaal Farmaajo talo fiican buu isiiyay
Beesha Caalamka oo ka digtay Mudo kororsi